musha Europe Vatambi Vanotamba Matteo Berrettini Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Matteo Berrettini Biography inokuudza chokwadi nezve nyaya yehudiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, vabereki (Luca Berrettini naClaudia Bigo), Mhuri, musikana (Ajla Tomljanovic).
Zvakare muBio ino, tichakuudza Chokwadi nezve Matteo Berrettini's Brother (Jacopo Berrettini), Hupenyu hwake Pachedu, Muhoro, Mararamiro, uye Net yakakosha.
Mumashoko akareruka, chinangwa ndechekuburitsa zvakadzama kutarisisa kwemutambi uyu akaberekerwa kuItaly. Yedu nyaya inotanga kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika mukurumbira wake.
Kuti unakidze fungidziro yako, tarisa iyo gallery yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwake kubva pakutanga kwake. Takafunga kuti zvakakodzera kuti tikuunze iwe Upenyu hwake Hwepakutanga uye Kubudirira mifananidzo, sezvakaonekwa pazasi.
Matteo Berrettini Biography: Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Ehe, isu tese tinomuziva iye semutambi-akaberekerwa muItari. Ndiye mumwe wevadiki vanokwira nyeredzi munyika yeTennis. Matteo Berrettini mutambi ane hukasha-wedare anozivikanwa nekushinga kwake uye pamberi.
Kunze kwekurumbidza kwake, takaona kuti vangani vanhu vachiri kuziva nhoroondo yehupenyu hwake.
Nekuda kweizvozvo, isu tafunga kuti zvinodikanwa nemufaro wese kukuunzira inonakidza ngano yaMatteo Berrettini. Pamusoro peizvozvo, kuparara kwezviitiko zvake tennis. Saka, neado yakawanda, ngatitangei.
Matteo Berrettini Yemwana Nhau:
Kune yedu nhoroondo yehupenyu, isu tichatanga nekutaura nezvenhoroondo yake yekuzvarwa. Matteo Berrettini akauya munyika ino pazuva re12th yaKubvumbi 1996. Akazvarwa kuna amai vake, Claudia Big, uye baba, Luca Berrettini, muRome, Italy.
Iye-aidiwa kwazvo tenesi mutambi akazvarwa semwana wedangwe pakati peimwe hama yake (Jacopo Berrettini). Matteo Berrettini nemukoma wake vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vavo (Luca Berrettini naClaudia Bigo).
Matteo Berrettini Kukura-kumusoro makore:
Iye mutambi akapedza hudiki hwake muRome, Itari, pamwe nemukoma wake Jacopo Berrettini. Pazera remakore matatu, vabereki vaMatteo Berrettini vakamutengera tenesi. Mukupesana, Berrettini pachake aive asingafarire mutambo.
Akasarudza kushambira uye judo. Zvakadaro, akatendeukira kutennis mushure mekunge mukoma wake Jacopo amubvunza kuti ape tenisi mukana.
Pamakore gumi nemana, Matteo Berrettini akadzidziswa kuCircolo Della Corte Dei Conti. Akatora chikamu muzviitiko zveITF Futures.
Murairidzi waMatteo Berrettini aive Vincenzo Santopadre, aimbove The Association of Tennis Professionals (ATP) Mufambi anotora chikamu.
Mufananidzo wekutanga waMatteo Berrettini naamai vake uye munin'ina munin'ina.
Matteo Berrettini Mhuri Mhemberero:
Mutambi akaberekwa muItaly anobva kumhuri yevanoda tennis. Vabereki vake, sekuru naambuya, uye mukoma chete akatora chikamu tennis.
Imba yeBerrettini yaive nesimba. Mhuri yacho yaigona kuwana mari yokubatanidzwa mukurovedza nyanzvi yetenisi.
Zvinodikanwa zvavo zvikuru, zvakadai sokupa zvokudya, pokugara, uye zvipfeko, zvakanga zvisati zviri chinetso chose chose. Ivo vaive nezvakawanda kudarika kukwana kuchengeta imwe neimwe yenhengo dzayo.
Matteo Berrettini Mhuri Kubva:
Mudiki tennis mutambi akaberekerwa muRoma, guta guru muItaly, pamwe chete neguta guru reLazio.
Zvisinei, madzitateguru ake aamai anobva kuBrazil. Ambuya vake amai vaamai, Lucia Fogaça, muBrazil wekuRio de Janeiro.
Ane dzinza rababa kubva kunaFlorence. Sekuru vababa vake vanobva kuFlorence, guta riri muCentral Italy uye kunze kweguta guru reTuscany.
Kunze kwemitauro yeItari neChirungu, Matteo Berrettini ari kuwedzera kuwedzera muchiSpanish. Pazasi pane Mepu inoratidza, mune zvine musoro mazwi, yake mhuri midzi.
Mepu inoratidza mhuri yaMatteo Berrettini.
Matteo Berrettini's Bio - Basa rekutanga:
Mutambo weTennis weItaly akatanga basa rake guru mu2015 pa 18. Akakunda kukudzwa kwake kwekutanga kwepro-level muItaly F30 mutambo mu2015.
Sezvineiwo, haana kutora chikamu mune chero makwikwi kwemwedzi yakawanda nekuda kwekukuvara.
Pakupera kwegore ra2016, akayera mafainari ake ekutanga muDambudziko reNhanho. Matteo akabva abuda semhare mumutambo wake wechipiri weITF kumakwikwi eSwitzerland F1.
Mutambi weItari nemunin'ina wake mushure mekukunda kwake kwekutanga mukwikwidzi wepro-level muItari F30 mutambo mu2015.
Matteo Berrettini Dzidzo:
Kunyangwe hazvo Matteo Berrettini akatanga basa rake pakutanga, aive achiri nenguva yekuenda kuzvido zvake zveruzivo. Nekudaro, sevazhinji vakwikwidzana vetenisi veItaly vakazvarwa muRome, vakatora chikamu pachikoro cheveruzhinji ipapo.
Zvisinei, nekuda kwebasa rake reTennis, zhinji yedzidzo yake yakasara yaifanirwa kunge isina kurongeka. Mamwe ese ekudzidziswa kwake aive kunze kwemadziro mana enzvimbo yekirasi.
Matteo Berrettini Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Iyo 6 tsoka 5 inches Italian akaenderera mberi nebasa rake rehunyanzvi aine ATP debut kuItaly Open muna 2017.
Akahwina mubairo wake wekutanga weATP mu2018 Swiss Open Gstaad. Pamusoro pezvo, iye akagamuchirawo rukudzo rwake rwekutanga muchiitiko chimwe chete ichocho nguva.
Matteo Berrettini mushure mekunge ahwina mubairo wake wekutanga weATP mu2018.
Mukupera kwegore ra2019, Berrettini yakawana budiriro muATP yepamusoro gumi masosi. Akave weNo.10 Italian paTash. Kukura kwake kusingawanzo mumutambo webasa uye simba rekufanoona zvakamupa mukurumbira.
Matteo Berrettini Biography - Iyo Yakabudirira Nyaya:
Akatsiga kutsvaga nzira yake akananga kuonekera, Berrettini akaenderera mberi nekudzidziswa kwake uye akavandudzika zvakanyanya achienzaniswa nezvaaimboita kare. Iro-ruoko rwerudyi rwakawana kukunda kwakawanda.
Tarenda wechidiki akawana mukurumbira mushure mekukunda kwake muItaly Open achipikisa Alexander Zverev. Alexnder mumwe wevakwikwidzi vetennis vepamusoro pasi rose. Mushure meizvozvo Matteo akahwina mukwikwidzi wake wechitatu weATP gare gare muna 5.
Matteo nemubairo wake mushure mekukunda muhondo yake yechitatu yeATP mu2019.
Kunyangwe kuve nemwaka unotyisa muna 2020, shasha yechidiki yakapinda mune yepamusoro 10 yepasirese. Matteo Berrettini achine nguva yakawanda yekutarisira kuita basa rake retenisi.
Akakunda Cameron Norrie uye akahwina mubairo wake mukuru, 2021 Queen's Championship.
Berrettini akakokwa neMutungamiri weItaly, Sergio Mattarella, kuti apinde muQuirinal Palace.
Akakunda Hubert Hurkacz mumakwikwi e2021 Wimbledon Championship kuti asvike basa rake rekutanga Grand Slam fainari. Moreso, Matteo akatora chikamu achipesana Novak Djokovic yeiyo Grand slam yekupedzisira.
Matteo neMutungamiri weItari, Sergio Mattarella (pakati), kuQuirinal Palace.
Ajla Tomljanovic Matteo Berrettini Nyaya:
Kune jaya rakatsvinda rine hunhu hunofadza, kuwana mumwe wako yaisazove nyaya. Kunyangwe asina kuroora, Berrettini parizvino ari muhukama neCroatia-akazvarwa tenesi nyanzvi Ajla Tomljanovic.
Ivo vaviri vakaita budiriro pamwe chete, vachisvika kumaquarterfinal muWimbledon 2021. Kunyangwe vaviri vacho vakanaka vasingawane kupedza nguva pamwe chete nekuda kwebasa ravo, ivo vanowanzoonekwa vakatenderedzwa pese pese mukana wavanowana.
Mutambi ane tarenda nerudo rwehupenyu hwake, Ajla Tomljanovic.
Vakaroorana vakaonekwa vari pamwe chete mudare, vachidzidzira nekuona mitambo.
Zvakangodaro, iyi haisi yekutanga hukama hwepamusoro-soro kumusikana waMatteo Berrettini. Aimbove muhukama naNick Kyrgios, mukwikwidzi wetennis wekuAustralia.
Matteo nemusikana wake vakachengeta hukama hwavo kubva kune vezvenhau. Vane nguva vachidanana. Nekudaro, isu tinongotarisira chete kunzwa mashoko akanaka nezvavo mune ramangwana nezve yavo inotevera nhanho.
Matteo Berrettini Hupenyu Hwemhuri:
Tennis inotamba inomhanya kuburikidza nemhuri yaMatteo Berrettini. Vanasekuru vake, baba, amai, munin'ina, uye kunyange musikana wake vakatora chikamu sevatambi muMutambo.
Zvakangodaro, hapana akasvika kumatunhu akaenzana seBerrettini muTennis. Tataura zvese izvo, ngatitorei kuputsika nekukurumidza kwenhengo yega yega yemba.
Mufananidzo wemhuri yaBerrettini.
Zvizhinji nezve Matteo Berrettini Vabereki - Baba:
Baba vaBerrettini, Luca Berrettini, aive nyanzvi yeTennis uye aive wechikwata chetennis. Munguva yemitambo, akasangana naamai vaMatteo, Claudia Bigo, vasati varoora.
Luca Berrettini, pakati pevamwe vemumhuri, akakosha pakuonekwa kwaMatteo nekukurumidza uye kubudirira mumitambo yemumunda. Kuroora kwake kuna Claudia kwakabereka vanakomana vaviri, avo Matteo Berrettini ari wekutanga.
Mufananidzo wababa vaMatteo, Luca Berrettini.
Nezve Vabereki vaMatteo Berrettini - Amai:
Amai vaBerrettini, Claudia Bigo, anowedzera ari mudiwa wetenisi uye akambotora chikamu muMitambo. Iye nemurume wake, Luca Berrettini vakaunza Matteo nemunun'una wake Jacopo kumutambo wetenisi.
Ivo pamwe pamwe dzimwe nguva vanouya kuzoona mwanakomana wavo kumakwikwi, senge ivo vaive varipo mubhokisi rake mu2019 kuUS Open.
Nezve Matteo Berrettini Mukoma - Jacopo Berrettini:
Matteo Berrettini ane munin'ina, Jacopo Berrettini, akazvarwa musi we 27th waNovember 1998. SaMatteo, ari pamusoro peiyo nyanzvi yeTennis. Jacopo naMatteo vanga vachidzidzira pamwechete kubvira makore gumi nemasere.
Mufananidzo waMatteo nemunin'ina wake, Jacopo Berrettini mushure memusangano wekudzidzisa.
Berrettini akawana ATP yake huru yekudhirowa pa2021 Sardegna Vhura mumadhirowa maviri, mukubatana nemukoma wake Matteo.
Vaviri ava vakazogamuchira wildcard mumadouble main draw. Kunyangwe izvo zvichienda kuma semifinals, uko Simone Bolelli naAndres Molteni vakarova.
Kupemberera kisimusi pamwe kwete kwete chete hama asi shamwari.
Nezve Matteo Berrettini Relatives:
Mutambi weItaly ndewemhuri inoshanda nesimba kuti ichengetedze ruzivo rwemhuri yavo sehungwaru sezvinobvira.
Zvakadaro, Matteo Berrettini anofanirwa kuve nedzimwe hama kunze kwababa vake, amai, uye munin'ina.
Chatingagona kutaura nezvacho ndiambuya vake amai vaamai, Lucia Fogaca. Iye chizvarwa cheRio de Janeiro kuBrazil.
Pane imwe h sekuru vake baba, kana zvisina kudaro, mudiwa wetennis, anobva kuFlorence kuItaly.
Hupenyu hweMunhu Matteo Berrettini:
Asi nepo vateveri vake vetennis vakajaira kusimba kwaBerrettini uye kusasimba mudare, vashoma vanomuziva kunze kwenhandare yetenisi.
Matteo Berrettini anoda chikwata chenhabvu cheItaly Fiorentina uye akasanganiswa neiyo NBA basketball fan. Sekudaro zvakare inonakidzwa nemitambo yemavhidhiyo uye kushambira.
Kushambira kunopa Matteo Berritini mufaro wakanyanya.
Iye akanaka anoshinga uye anozivikanwa pasocial media, aine ega uye akasimbiswa maakaundi pane akawanda mapuratifomu. Ane 861k Instagram vateveri, uye ane vangangoita 4k vateveri pa Twitter.
Matteo Berrettini Mararamiro:
Kupesana, zvakafanana nevakawanda vepasi-kirasi Tennis nyanzvi, Matteo achinjisa pekugara kwake kuM Monte-Carlo, Monaco. Iyo ine yakanakisa mamiriro emumhepo kudzidzisa pamwe neakanakisa Tennis matare uye zvakare iri nyika isina mutero.
Matteo Berrettini nemotokari yake nyowani:
Kunze kweimba yake inodhura muMonaco, mutambi wenhabvu ane mashoma emota akaunganidzwa, kunyanya zvigadzirwa zveMercedes-Benz, mota yemagetsi kubva kune mumwe wevatsigiri vake, Mercedes-Benz. Iye anodawo Peugeot uye, muna Chikunguru 2019, akasungwa seMutevedzeri wePeugeot.
Collage yemotokari yaMatteo Berritinini.
Matteo Berrettini Net Kukosha:
Matteo ari pakati pematarenda madiki mu tennis uye akaenderera mberi nekukwenenzvera hunyanzvi hwake. Akaunganidza hupfumi hwakawanda kuburikidza neakakunda basa mumakundano makuru. Zvinoenderana Nezvakanyanya Zvemitambo,
Matteo Berrettini mambure akakosha anenge madhora zviuru zvitanhatu. Mutambi wetenisi weItaly ane $ 6 mumubairo mari kusvika parizvino, uye hapana kusahadzika kuti ichawedzera mumakore anotevera.
Matteo Berrettini zvakare anoita yakawanda yakanaka mari kuburikidza neBrand endorsements. Akasaina madhiri ekusimudzira naColavita, Capri Watch, Peugeot, Uliveto, Lotto, uye Head.
Aya madhiri anobatsira Matteo kuwedzera hupfumi hwake uye kuunza imwe mari. Nepfuma yakakura kudaro, isu tine chokwadi chekuti Berrettini inotungamira hupenyu hwepamusoro uye hwomutambarakede.
Lotto akatsigira mutambi wemitambo yetennis nezvembatya dzake neshangu uye Musoro kumatare ake. Asi zvekare, Signum inogadzira tambo mumaracquets ake Pro.
Pane kuratidzwa nemumwe wake vanotsigira vanopfeka.
Matteo Berrettini Untold Chokwadi:
Kunze kwenyaya yehupenyu yakataurwa kusvika parizvino, hezvino zvinonakidza Chokwadi Nezve Matteo Berrettini nebasa rake reTennis.
Chokwadi # 1: Quarantine chiitiko:
Nyanzvi yeItaly tenesi yakatove yakagovana ruzivo rwake panguva yechirwere cheCoronavirus neEuro Sport, achitaura kuti iye nemumwe wake vakatadza kuonana sei vachiiswa muhotera imwe chete, asi nhurikidzwa nhanhatu dzakaparadzana.
Ivo vadikani vachiri pamwe mushure mekubuda mudenda uye vachienda vakasimba nehukama hwavo.
Chokwadi # 2: Chiroto chaBerrettini:
Zvinonakidza, Matteo ane chishuwo chekuve biologist uye kushanda nemhuka. Kutaura nezvezviroto, murwi wemuItaly anorota ingano yeAmerica John McEnroe, uye tenesi chidhori, iyo 20-nguva Grand Slam shasha Rafael Nadal.
Chokwadi # 3: Berrettini's Racquet:
Matteo Berrettini parizvino anoshandisa iyo Musoro Graphene 360 ​​pamwe neExtreme MP Racquet, iyo inonzi inosanganisa kugona pamwe nekuyera kweGraphene 360 ​​neSpiralFibers uye inoshandisa zvivharo zvakawandisa zvakaumbwa-faneli kubvumidza kufamba kwakasimba uye kupfura kwakasimba.
Hunhu uhwu mumutambo weBerrettini pasina mubvunzo waita mutsauko wakakura mukuchinja kwake.
Naiye Musoro wake Graphene 360 ​​pamwe neExtreme MP Racquet.
Chokwadi # 4: Kurega kubva kuOlimpiki:
Zvinonzi Wimbledon 2021 wekupedzisira Matteo Berrettini akamanikidzwa kubuda muTokyo Olimpiki yakanyorwa pazuva rechi23 raChikunguru 2021.
Kubviswa uku kwakakonzerwa nekunetsekana kwemhasuru, kwaakaita kuLondon kwaakazobuda seyekutanga yekuItaly kusvika pamakwikwi eGrand Wimbledon.
Mu2019, Berrettini akatanga chirongwa cherudo cheTennis ye Africa. Akashamisawo wechidiki mudiki wetenisi uye akapona nekenza nekutarisira mari yake yehutano panguva ye2019 ATP mubairo mutambo. Kuvapo kwake kwaive kukurudzira Cancer Research UK kusimudzira.
Chokwadi # 6: Berrettini's Coach:
Vincenzo Santopadre akarairidza Berrettini kubvira aine makore mapfumbamwe. Akazvarwa pazuva regumi nerimwe raNyamavhuvhu 11 muRome, Santopadre inyanzvi yeTenisi yeTaliyane iyo yakaita chinzvimbo chegumi pasirese, chinzvimbo chake chakanakisa, mu1971. Berrettini akasvika kuma100 US Open semifinal uye akapinda ari pamusoro gumi mumwaka mumwe chete.
Vincenzo Santopadre (kurudyi) akarairidza Berrettini kubvira aine makore mapfumbamwe ekuberekwa.
Chokwadi # 6: Makomborero uye Marekodhi:
Kunze kwekuva Mutambi Akanyanya Kuvandudzwa wemubairo wegore, akaita mamwe marekodhi anozivikanwa.
Akatora rukudzo pamubairo weHungary Open Men's Singles, menduru yeMercedes Cup Men's Singles, uye Phoenix Challenger Men's Singles rukudzo, zvese muna 2019.
Chokwadi # 7: kwake kusangana naDjokovic:
Pakutanga kwaChikunguru 2021, Matteo Berrettini akapinda mukurwisa Novak Djokovic kuWimbledon Men's Singles Yekupedzisira.
Yakanga iri nguva huru munhoroondo yetenisi uye yakakosha mumujaho weGOAT (Greatest Of All Time). Matteo akatamba zvakanakisa. Djokovic akacherekedza yake yakafambiswa ruoko pamberi.
Nekudaro, Matteo akaruza kuna Djokovic, achitora mukombe pamutambo wake wechitatu mushure memutambo wemaawa matatu nemaminetsi makumi maviri nematatu. Kune rimwe divi, Matteo aifara kuti asvika pamukombe mukombe kekutanga.
Mutambo wacho waive mucherechedzo wezvinhu zvakanaka zvichauya mune ramangwana raMatteo Berrettini. Pasinei neizvozvo, akaisa muhomwe mari inodarika $ 1.2 miriyoni semumhanyi-mumakwikwi.
Matteo Berrettini Biography Pfupiso:
Kuti uwane pa-iyo-iyo tariso pfupiso yehupenyu hwake nhoroondo, ona zvidimbu uyezve tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo nezve ane mukurumbira tenesi mutambi.
Matteo Berrettini Biography Dhata
Zita rizere: Matteo Berrettini
Zuva rekuzvarwa: 12th Zuva raApril 1996
Nzvimbo yekuzvarirwa: Roma, Lazio, Itari
Basa: Mutambi weTennis
Baba: Luca Berrettini
Amai: Claudia Biggo
Vanun'una: Jacob Berrettini
Musikana: Ajla Tomljanovic
Hobbies: Tennis, Basketball, Kushambira, Soccer, Judo
kukwirira: 6 ft 5 mu (1.96m)
Net Worth: $ Miriyoni makumi maviri (6)
Tine tarisiro yedu kuti wakanakidzwa neMatteo Berrettini Biography uye Yehucheche Nyaya. Isu tinomuziva kuti ave nehunhu hunoshanda, uye nekuda kwekuzvipira kwake kwakasimba pabasa rake, angadai asina kusvika pano.
Mu2019, akave wekutanga Italian Tennis pro kukodzera kumutambo weATP kupera kubva Corrado Barazzutti muna 1978. Nekukunda Dominic Thiem, akazove mutambi wekutanga kubva munyika yake kubuda pamusoro pamutambo wemubairo weATP.
Kunyangwe paine nzizi zhinji dzichiri kuyambuka, Matteo Berrettini ane ramangwana rakajeka muTennis. Wakawana Matteo Berrettini Biography uye Yevacheche Nyaya kuti ibatsire?
Kana zvakadaro, iwe une chimwe chinhu chingatibatsira maererano nemaitiro akanakisa? Ndapota titumireiwo mhinduro kuti tizivise. Zvikasadaro, ndinokutendai nekuverenga uye kuramba makabatana kune mamwe biography chokwadi nepamusoro-notch chokwadi.